Dowladda ma ogtahay Musuq-maasuqa ka jira Jaamacadda Umadda? | KEYDMEDIA ONLINE
Dowladda ma ogtahay Musuq-maasuqa ka jira Jaamacadda Umadda?
Jaamacadda ayaa Maalmo kahor Muqdisho ugu dabaal degtay 70 sano guurada kasoo wareegtay aasaaskeeda.
MUQDISHO, Soomaaliya - Dowladda Federalka Soomaaliya sanad walba waxay siisaa Jaamacadda Ummadda Soomaaliyeed lacag gaareysa $5 milyan oo dollar, si loogu daboolo mushaaraadka howlwadeennada, Maamulka, Macallimiinta iyo shaqooyiinka Somali National University [SNU].
Iyadoo Jaamacadda ay dowladdu ku bixiso dhaqaala intaas la eg ayaa todobaadkan dhowr jeer Ardaydan loo diiday inay galaan Jaamacadda kadib markii ay bixin waayeen lacago laga qaado bil walba, oo aan dowladda ka warqabin.
Qaar kamid ah ardayda oo la hadlay Keydmedia Online, ayaa sheegay in Jaamacadda Umadda oo lagu dhisay Canshuurta Shacabka ay u shaqeysi sidii Jaamacadaha kale ee gaarka loo leeyahay marka la fiiriyo lacagta laga qaado dadka wax ka barta.
Waxaa intaasi dheer in qaab qabiil iyo musuq-maasuq lagu qoro ardayda kusoo biiraysa Jaamacadda, kuwaasoo ka yimaada gobollada kala duwan ee dalka, waxaana lagu kala reebaa Imtixaanka, oo lagala baxo kaliya kuwa tilmaaman.
Cabasho xoog leh ayaa laga muujiyay nidaamka ka jira Jaamacadda oo shaqsiyaad gaar ah ku tagri-falla dhaqaalaha dowladda ugu tala-gashay oo usoo dheer midka sharci darrada ah ee laga qaado ardayda.
Madaxweyne Farmaajo oo ah duqa Jaamacadda ayaa loogu baaqey inuu soo farageliyo hadii uusan wax kala socon musuq-maasuq ka jira Jaamacadda, islamarkaana wax ka qabto maamulka meesha ka jira ee ka macaashay hantida qaranka.
Jaamacadda ayaa Maalmo kahor u dabaal degtay 70 sano guurada kasoo wareegtay aasaaskeeda, waxaana hambalyo u diray madax kala duwan oo uu Farmaajo kamid yahay.